DAAWO VIDEO: Axmed Madoobe ‘‘Hubka Dowladda Somaliya waxaa loo geeyaa Al-Shabaab, amnigana faraha ayuu ka baxay‘‘! | HalQaran.com
DAAWO VIDEO: Axmed Madoobe ‘‘Hubka Dowladda Somaliya waxaa loo geeyaa Al-Shabaab, amnigana faraha ayuu ka baxay‘‘!
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo Khilaaf uu Muddooyinkii dambe kala dhexeeyay Dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu Dalka Amnigiisu meel xun ku socdo.
“Amniga waxaad garan kartaan meesha uu marayo, Amnigii Faraha ayuu ka baxay, waxaana la doortay in Ciidamada la Fur furo oo Al-Shabaab Hubka loo geeyo, Wax Dawladnimo ah maaha, wax wadanku ku sii socon karo maaha, aanu usoo noqo maalmihii lasoo dhaafay waxa dhacay, Amniga aan ka wada shaqayno oo ha la iska daayo waxa la isku hayo “ Ayuu yiri Axmed Madoobe.
Dhaliilaha uu Axmed madoobe u jeedinayo Dawladda dhexe ayaa dad badan u arkaan inuu ku beegsanayo DF Soomaaliya oo ku gacan seertay Doorashadii Kismaayo ee mar kale lagu doortay.
Halka hoose ka daawo muuqaalka Axmed Madoobe:
amniga faraha ayuu ka baxay
Hubka Dowladda Soomaaliya
waxaa loo geeyaa Al Shabaab